အသံမပြု၊ နုတ်မဖွင့်ဘဲနေသောသိုး | The Silence of the Lambs | Real Conversion
(ဟေရှာယ ၅၃ထဲက ၈ကြိမ်မြောက် ဒေသနာတော်)
ဒေါက်တာ အာရ်အယ်လ်ဟိုင်မာ ဂျောအာရ်၏
၂၀၁၃ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၄ရက်နေ့၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင် ဘုရားနေ့၊ နံနက်ပိုင်း ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
“ထိုသူသည် ညင်းဆဲခြင်းနှင့် နှိပ်စက်ခြင်း၊ ရှုတ်ချခြင်းကိုခံ၍ နုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏။ အသေ သတ်ခြင်းငှါ ဆောင်သွားသောသိုးသငယ်ကဲ့သို့ သူ့ကိုဆောင်သွား၍၊ သိုးသည် အမွေးညှပ် သောသူရှေ့မှာ မမြည်ဘဲနေသကဲ့သို့၊ သူသည် နုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၇)။
ကျမ်းပိုဒ်၏နောက်ဆုံးစကားလုံးသည် ခရစ်ယာန်မာတုရအဖို့ စိတ်ရူအးက၍အားကြီးစေခဲ့သည်။ ၎င်း စကားလုံးကို ကြားရသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးကို တက်ရူအးကစေပါသည်။ ပိုလီကတ်သည် ၂ရာစု လောက်က တရားဟောဆရာတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်လို ထိုဆရာအား ပိုလီကတ်ဟု ခေါ်ကြပြီး လက်တင်လို ပိုလီကာပတ်စ် ဟုခေါ်ကြသည်။ ပိုလိုကတ်သည် တမန်တော် ရှင်ယောဟန်၏တပည့် တော်အရင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ နှစ်အတန်ကြာသောအခါ “သင်ဟာ အိုမင်းသောအဘိုးတစ်ယောက်ပါ၊ သေ မယ်ဆိုလည်း သေသင့်တဲ့သူပါ၊ ဒါဖြင့် ဤကျိန်ဆိုမှုပြုမည်ဆိုလျှင် သင့်အားလွတ်ပေးမည်ဟု ဆိုကြ သည်။ ဘုရင်ဆီဇာလက်ထဲ အသေခံယဇ်အပူဇော်ခံဖို့ မည်မျှကြောက်ရွှံ့ဖွယ်ဖြစ်သနည်း? အကယ်၍ သင် ကျိန်ဆိုမှုကိုပြုမည်ဆိုလျှင် ဆီဇာဘုရင်ကသင့်အား လွတ်ပေးမည်ဟုဆိုသည်၊ ခရစ်တော်ကို ငြင်းပယ်ပြီးလျှင် သင့်ကိုလွတ်ပေးမည်ဟုဆိုပါသည်။
ပိုလီကတ်ဖြေကြားသည်မှာ၊ “ခရစ်တော်၏အမှုတော်အတွက် ရှစ်ဆယ်ခြောက်နှစ် အမှုထမ်းခဲ့ပြီ၊ ကိုယ်တော်ဘယ်တော့မှ အမှားအယွင်း ကျွန်ုပ်အပေါ် မပြုခဲ့ဖူးပေ။ ကျွန်ုပ်ကို ရွှေးနုတ်ကယ်တင်ပေး သောအရှင်အား အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်အပြစ်တင်ပါမည်နည်း? တရားသူကြီးမင်းက ဒါဆိုသင့်ကိုမီး ဖြင့်ရှို့ပြီး အသေသတ်မည်ဟု ပြောခဲ့ပါသည်။” ပိုလီကတ်ကဆက်ပြီး “မီးဖြင့်ရှို့လျှင်လည်း ခဏတာ ငြိမ်းသွားမှာပါ၊ သင်မသိသေးသော ထာ၀ရမီးငရဲဟာ ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်၍၊ အဘယ်ကြောင့် အသက်တာ အသစ်၌ ပြောင်းလဲဖို့ ကြန့်ကြာရပါသနည်း၊ မင်းကြီးစိတ်ကြိုက်သာ လုပ်ဆောင်ပါဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။”
ထိုခဏတွင် ငယ်သားအား၊ “ပိုလီကတ်သည် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူ တစ်ယောက်အဖြစ် သစ္စာ ဆိုဝန်ခံလိုက်ပြီဟု တရားခွင်၌ ကြော်ငြာခိုင်းခဲ့သည်။ “သူ့ကို အရှင်လတ်လတ်မီးရှို့ခဲ့ကြသည်၊”! ဘုရားမဲ့ဝါဒတို့ ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ခဲ့ကြသည်။ မီးကိုလည်းပြင်ဆင်ခဲ့ကြပြီ။ ကွပ်မျက်မယ့်သူက ပိုလီကတ်အား ကြိုးဖြင့်မီးစင်ထက်၌ တုတ်နှောင်ရန် ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ ပိုလီကတ်က ဖြည်း ညင်းစွာဖြင့် ပြောကြားသည်မှာ၊ “ကျွန်ုပ်အမြင်နှင့်ကျွန်ုပ် နေပါရစေ၊ ကျွန်ုပ်အား ဤမီးလောင်ခြင်း ဘေးထဲမှ ထွက်မြောက်စေနိုင်သောသူ၊ ဤထင်းပုံ၌ ဒီအတိုင်းရှိစေနိုင်ပါတယ်၊” ဟူ၍ပြောကြားခဲ့ပါ သည်။
ပိုလီကတ်သည် အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့သည်။ “ကျွန်ုပ်သည်၊ သေသင့်သူ ပါ”ဟူ၍ ချီးမွမ်းခဲ့၏။ မီးလည်းတဖြည်းဖြည်းနှင့် တစ်ကိုယ်လုံးကို လွမ်းလေတော့၏။ သို့သော် ထိုသူအား မကျွမ်းလောင်နိုင်ခဲ့ပေ။ ကွပ်မျက်သူက အချွန်ဖြင့်ထိုးလည်း ထိုသူမသေခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့် အဆုံး၌ ပိုလီတာပတ်စ်သည် စမုရအသင်းတော်၏ သင်းအုပ်ဆရာတပါးလည်းဖြစ်၊ ရှင်ယောဟန်၏ တပည့်ကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစခဲ့သည်။ (see James C. Hefley, Heroes of the Faith, Moody Press, 1963, pp. 12-14).
စပါဂျန်ကလည်း နှစ်ခြင်အသင်းတော်၏ မတုရဂျင်ဘောက်ချာ အကြောင်းပြောခဲ့ဖူးသည်၊ သူသည် အင်္ဂလီကန်အသင်းတော်၏ ဘီရှောပ် ကာရိမ်မာနှင့် ရစ်လေးတို့ရှေ့ ရောက်ခဲ့ဖူးသည်။ သူတို့ က နှစ်ခြင်းယုံကြည်သူတို့ကို မီးစင်ထက်၌ အသေခံစေနိုင်သည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ဖူးသည်။ သူမပြော ကြားသည်မှာ၊”ကျွန်မဟာ စစ်မှန်သော ခရစ်တော်၏အစေခံပါ၊ အကယ်၍ သနားစရာသင်တို့၏နှမ၊ ကျွန်မကို အသေခံစေမည်ဆိုလည်း ဂရုတစိုက်ဘုရားရှင်ကို ကြောက်ရွှံ့ကြပါ။ ခြေခွေးအလား ရောမ လူတို့ကို ဘုရားသခင်သည် သင်တို့ထံသို့ စေလွတ်မူဖြစ်ပြီး၊ သင်တို့လည်း ဘုရားရှင်အဖို့ ပြင်းထန် သောဝေဒနာကို ခံစားကြရမှာမလွဲပါ” ဟူ၍ပြောကြားခဲ့သည်။ သူပြောသမျှအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ခရစ်ယာန် မာတုရသည် ခြိမ်းခြောက်မှုကို ခံခဲ့ရသည်! (see C..H. Spurgeon, “All-Sufficiency Magnified,” The New Park Street Pulpit, volume VI, pp. 481-482).
ခေတ်အဆက်ဆက် ခြိမ်းခြောက်မှုများစွာ ရှိသော်ငြားလည်း၊ ပိုလီကတ်နှင့်ဂျင်ဘောက်ချာတို့ သည် မိမိတို့သည် မီးစင်ထက်မှ ယုံကြည်ခြင်းကို ခိုင်မြဲစွာစွဲကိုင်ခဲ့ကြသည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် လည်း အသေခံဆဲတွင် ကြီးမားသော ခြိမ်းခြောက်မှုကို ခံခဲ့ရသည်! ကိုယ်တော်သည် ယဇ်ပုရောက် ဟိတ်အကြီးတို့ကို စကားပြောခဲ့သည်။ ရောမဘုရင်ခံ ပိလတ်မင်းကိုလည်း စကားပြောခဲ့သည်။ သို့ သော် ကိုယ်တော်သည် သေခြင်းမှအမျှ နာကျင်စွာ ဝေဒနာခံစားခဲ့ရသည်၊ ပရောဖက်ဟေရှာယမိန့် ကြားထားသကဲ့သို့ အံ့ဩဖွယ်နုတ်ပိတ်လျှက် ငြိမ်သက်စွာအသေခံခဲ့သည်။
“ထိုသူသည် ညင်းဆဲခြင်းနှင့်နှိပ်စက်ခြင်း၊ ရှုတ်ချခြင်းကိုခံ၍ နုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏၊ အသေသတ်ခြင်းငှါ ဆောင်သွားသောသိုးသငယ်ကဲ့သို့ သူ့ကိုဆောင်သွား၍၊ သိုး သည် အမွေးညှပ်သောသူရှေ့မှာ မမြည်ဘဲနေသကဲ့သို့၊ သူသည် နုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၇)။
ပရောဖက်ပြောကြားသည်မှာ၊ ငြွထြွိုးနှက်ကြသော်လည်း ကိုယ်တော်သည် နုတ်မဖွင့်ဘဲနေ၏! ကားတိုင် ထက် သံမိုစွဲခြင်းခံရသော်လည်း ကိုယ်တော်သည် နုတ်မဖွင့်ဘဲနေ၏! ကျွန်ုပ်တို့ ရွှေးချယ်ထားသော ကျမ်းပိုဒ်ဆီသို့ သွားကြစို့၊ နက်နဲစွာသော မေးခွန်းသုံးခုနှင့် အဖြေသုံးခုကို ထုတ်ဖော်ကြပါစို့၊
၁။ ပထမ၊ ယေရှုဟုခေါ်သော လူသားကား အဘယ်သူနည်းထိုသူအား ပရောဖက်က ကြို
“ထိုသူသည် ညင်းဆဲခြင်းနှင့်နှိပ်စက်ခြင်း၊ ရှုတ်ချခြင်းကိုခံ၍ နုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏”။ (ဟေရှာယ ၅၃း၇)။
သမ္မကျမ်းစာက ပြောကြားသည်မှာ၊ ကိုယ်တော်သည် ဘုန်းတန်ခိုးတော်နှင့် စွဲပယ်တော်မူသောသခင် ဟု မိန့်တော်မူပါသည်။ ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သော ဘုရားဖြစ်၍လူသားဇာတိကို ခံယူသူဖြစ်သည်ဟု မိန့် တော်မူပါသည်! ဘာသာအယူ “ဘုရားတို့၏ဘုရား” ဟူ၍ဆို၏။ ယေရှုသည် လူသားဆရာတစ်ဦးမျှ သာဖြစ်၏၊ ပရောဖက်တစ်ဦးမျှသာဖြစ်၏ဟု မယူဆသင့်ပါ! ထိုသို့တွေးခေါ်ယုံမျှသာ တွေးခေါ်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့အား ကိုယ်တော်မိန့်တော်မမူထားပါ။
“ငါသည် ခမည်းတော်နှင့်တစ်လုံးတ၀တည်း ဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏” (ယောဟန် ၁ဝး၃၀)။
“ယေရှုကလည်း၊ ငါသည်ပြန်ရှင်ခြင်းအကြောင်း၊ အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်၏။ ငါ့ကို ယုံကြည်သောသူသည် သေလွန်သော်လည်း အသက်ရှင်လိမ့်မည်” (ယောဟန် ၁၁း၂၅)။
ထိုသို့ ယေရှုမိန့်တော်မူခြင်းကို နတ်ဆိုးစွဲသောသူဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြ၏။ မှားယွင်းသောအယူ၊ အာရုံ ကို နှောက်ယှက်စေသောအယူ၊ ငန်းဖျားစေသောသူအယူနှင့် အန္တရာယ်ဆိုးကြီးဟု သမုတ်ကြသည်! ယေရှုက ခမည်းတော်နှင်သားတော်သည် တလုံးတ၀တည်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ “ငါသည် အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းအရင်းဖြစ်၏” ဟူ၍ ဆိုသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကလည်း ကိုယ်တော် ထိုကဲ့သို့ဖြစ် မလာခဲ့သော် အများကြီးမှားသွားနိုင်သည်ဟု ဆိုကြသည်!
စီ.အက်စ် လူးဝေ့စ်နှင့် အခြားသောအခက်အလက်၌ ကျွန်ုပ်သဘောမတူနိုင်ပါ။ ယေရှုခရစ်၏ အောင်မြင်ကျော်ကြားသော ဖော်ပြချက်ကို မည်သို့သဘောမတူ ဖြစ်နေနိုင်မည်နည်း? စီအက်စ်လူး ဝေ့စ် ပြောကြားသည်မှာ၊
ယေရှုသည် အကျင့်စရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ သင်ကြားရေးဆရာတစ်ဦးဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်လက်ခံ ပါသည်၊ သို့သော် ဘုရားတရားဖြစ်သည် ဆိုခြင်းအား လက်မခံနိုင်ပါ” ဟူသော မိုက်မဲမှုကို ကျွန်ုပ်ကာကွယ်ပါမည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့မပြောမိဖို့ အရေးကြီးသောအချက်ပင်ဖြစ် သည်။ လူသားသည် လူသားတစ်ဦးမျှသာ ဖြစ်သည်ဟု ယေရှုသည် မိမိကိုယ်ကို မိမိပြော၊ အကျင့်စရိတ္တကောင်းမွန်ရေးကိုသာ သွန်သင်သော ဆရာတစ်ပါးဟု မပြောခဲ့ပါ။ ကိုယ်တော် သည် အရူးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ မရိုးဖြောင့်သောသူ၊ ငရဲသားတစ်ဦးဖြစ်သည်ဟု ပြော ကြားသည်။ သင်သည်လည်း ရွှေးချယ်မှုပြုရပါမည်။ ကိုယ်တော်သည် လူသားတစ်ဦးမျှသာ လော့၊ ဘုရား၏သားတော်လား ရွှေးချယ်လိုက်ပါ။ အရူးတစ်ယောက်လား၊ လူဆိုးတစ်ဦး လားရွှေးချယ်ပါ။ သင်က ကိုယ်တော်သည် အရူးတစ်ယောက်ဆိုခြင်း၊ တံတွေးနှင့်ထွေးခြင်း နတ်ဆိုးတစ်ယောက်ပမာ အသေသတ်ခြင်းမှ ကိုယ်တော်သည် သခင်ဘုရားဖြစ်ကြောင့် ခြေ တော်ရင်း၌ ဝန်ချတောင်းပန်လိုက်ပါ။ ကိုယ်တော်သည် လူသားဆရာတစ်ဦးမျှသာ ဖြစ် သည်ဟု မိုက်မဲ့စွာနှင့် မချဉ်းကပ်လိုက်ပါနှင့်။ ကိုယ်တော်သည် ထိုသို့ကျွန်ုပ်တို့ကို မပြော စေလို၊ မရည်ရွှယ်စေလိုပါ။ (C. S. Lewis, Ph..D., Mere Christianity, Harper Collins, 2001, p.52).
သင်သည် “ကိုယ်တော်အား နတ်ဆိုးတစ်ပါးသာဖြစ်သည်ဟု အသေသတ်ပစ်နိုင်သည်၊ သခင်ဘုရား ဖြစ်သည်ဟု ခြေတော်ရင်း၌ အပြစ်ဝန်ချနိုင်ပါသဖြင့် သင်ရွှေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်” ယေရှုမိန့်တော်မူ သည်ကား၊
“ယေရှုကငါသည် လမ်းရီးဖြစ်၏၊ သမ္မာတရားလည်းဖြစ်၏၊ အသက်လည်းဖြစ်၏။ ငါ့ကို အမှီမပြုလျှင် အဘယ်သူမျှ ခမည်းတော်ထံသို့ မရောက်ရ” (ယောဟန် ၁၄း၆)။
သင်ကိုးစားယုံကြည်လိုက်ပါ! ဗုဒ္ဓဘုရား၊ ဟိန္ဒူဘုရား၊ အစ္စလမ်ဘာသာဘုရားနှင့် မမှားယွင်း သင့်ပေ။ “ထိုသို့ထင်မှားခြင်းကို ကိုယ်တော်ခွင့်မပြုပေ။ ထိုသို့ရည်ရွှယ်ချက်လည်း မရှိစေလိုပါ။” အခြားရွှေးချယ်စရာ ကိုယ်တော်ပေးမထားပါ။ ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူသည်ကား “ငါ့ကိုအမှီမပြုလျှင် အဘယ်သူမျှ ခမည်းတော်ထံသို့ မရောက်ရ”ဟု လာသည်။ စီ.အက်စ်လူးဝေ့စ် ပြောကြားသည်မှာ၊ “သင်သည် ကိုယ်တော်အား တံတွေးနှင့်ထွေးလျှက် အသေသတ်ပစ်နိုင်၏ သို့မဟုတ် သခင်၏ခြေ တော်ရင်း၌ ဝန်ချတောင်းပန်နိုင်သည်။ သင်ရွှေးချယ်နိုင်သည်ဟု ဆိုထားသည်” တစ်ခုမဟုတ် နောက် တစ်ခုဆိုသည်။ ဘယ်သူမှ ဤအမှု၌ ကြားဝင်၍မဖြစ်နိုင်! ကြားနေဖို့ ကြိုးစားကြပေမယ့် တကယ် ကြားနေ၍ ဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ “ထိုသို့ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ရွှေးချယ်မှုအတွက် ပြောထား ခြင်းမရှိပါ။”
၂။ ဒုတိယ၊ မိမိကို ညှင်းဆဲနှိပ်စက်ကြသောသူတို့အား ယေရှုသည် ကိုယ်ကိုကို မကာကွယ်ခဲ့ သနည်း?
“ထိုသူသည် ညင်းဆဲခြင်းနှင့် နှိပ်စက်ခြင်း၊ ရှုတ်ချခြင်းကိုခံ၍ နုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏။ (ဟေရှာယ ၅၃း၇)။
သိပ္ပံပညာရှင် အာဘတ်အိန်းစတိန်း၏ အတွေးအခေါ်သည် ခရစ်ယာန်တဦးကဲ့သို့ ပို၍တွေးခေါ်ခဲ့ သည်။
သတင်းကောင်း (လေး)ကျမ်းကို ယေရှုအတူပါရှိသည် ဟူသောခံစားချက်မျိုးမရှိဘဲ၊ ဖတ်၍ နားလည်မည်မဟုတ်ပေ။ ကျမ်းစကားတစ်ခုတိုင်း၌ ယေရှုသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပါသည်။ ဒဏ္ဍာရီစကားမဟုတ်၊ အသက်နှင့်ပြည့်နှက်နေပါသည်” (Albert Einstein, Ph.D., The Saturday Evening Post, October 26,1929).
ယနေ့ညပင်လျှင် ကိုယ်တော်ကို အဘယ်ကြောင့် ကားတိုင်ပေါ် အသေခံစေခဲ့သနည်း? ဟူ၍ပြောကြား ခြင်းမရှိကြ။ အဘယ်ကြောင့် ယေရှုသည် မိမိကို နှိပ်စက်ညှင်းဆဲသောသူတို့ရန်မှ မကာကွယ်ခဲ့သ နည်း၊ ပြင်သစ်အတွေးခေါ်ပညာရှင် ရောစ်ဆောစ်၊ ဘုရားမဲ့ဝါဒီ ထူးဆန်းသောမေးခွန်း၏ အဖြေနီးပါး ပြောကြားခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
ဆိုကရေးတီး အတွေးအခေါ်ပညာရှင်သည် အသက်ရှင်ခဲ့သလို၊ သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယေရှုသည်လည်း အသက်ရှင်ခဲ့ပြီး ဘုရားသေဆုံးသည်ဟုဆို၏ (Jean-Jacques Rousseau, French philosopher, 1712-1778).
ယေရှုသည် မိမိကိုယ်ကို သေခြင်းမှ မကာကွယ်ခဲ့ပါ၊ အကြောင်းမှာ ကိုယ်တော်သည် လက်ဝါး ကားတိုင်တွင် ပြင်းစွာသောဝေဒနာကို ခံလျှက်၊ အသေခံရန် ရူအးကဆင်းလာခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာက ကားတိုင်ပေါ် အသေခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
“ထိုမှတစ်ပါးကိုယ်တော်သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားရမည်။ လူအကြီးအကဲ ယဇ်ပုရောဟိတ် အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာတို့လက်၌ များစွာခံရမည်၊ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ပြန်ရှင်လိမ့်မည် ဟူသောအကြောင်းများကို ထိုအခါမှစ၍ တပည့်တော်တို့အား ပြတော်မူ၏” (မဿဲ ၁၆း၂၁)။
အက်ပလိုင်း ဓမ္ဓသစ်အနက်ဖွင့်ကျမ်း၌ ဖော်ပြထားပါသည်၊
ပေတရုကယေရှုသည် ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ မေရှိယသခင်၊ အသက်ရှင်သော ဘုရား၏သားတော်ဟု ဝန်ခံခဲ့သည်(မာ ၈း၂၉)။ သို့သော် ယေရှုဤလောကသို့ မည်သည့်အ မှုကို ပြုရန်ရူအးကလာသည်ကိုမူ ပေတရုနားမလည်ခဲ့ပေ။သူသည်လည်း အခြားသောဣသရေလ လူတို့ကဲ့သို့ တွေးခေါ်ခဲ့သည်၊ ယေရှုသည် ဤလောက၌ ဘုရင်အဖြစ်ရူအးကလာသည်ဟု ထင် ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုက လူသားသည် များစွာသောဆင်းရဲခြင်း၊ နာကျင်ခြင်းနှင့်သေ ခြင်းကို ခံရမည်ဟု ပြောခဲ့သည်ကို ပေတရုလက်မခံခဲ့ပါ။ ထိုသို့သော စကားများအားဖြင့် ပေတရုက ယေရှုကို ဆုံးမခဲ့သေးသည်။ ယေရှုသည် သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် ပြန်ရှင် မည်ဟု သိထားသည်။ တပည့်တော်များသည် ထိုသို့သောဖြစ်ပျက်လာမည်ကို လုံး၀နားမ လည်ခဲ့ကြပေ။ (Thomas Hale, The Applied New Testament commentary, Kingsway Publications, 1996, pp. 260-261).
ကျွန်ုပ်တို့လည်း ၎င်းဖြစ်စဉ်ကို နားလည်ထားရမည်၊ နုတ်ကပတ်တော်၌ လာသည်ကား၊
“ယေရှုခရစ်သည် အပြစ်ရှိသောသူတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှါ၊ ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူ သည် “ (၁တိ ၁း၁၅)။
ကားတိုင်ပေါ်အသေခံပေးခြင်းဖြင့်၎င်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်ခြင်းဖြင့်၎င်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အား ထာ၀ရ အသက်ကို ပေးသနားတော်မူခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ လက်ဝါးကားတိုင်၌ သေခြင်းတိုင် ကိုယ်တော်သည် ညှင်း ဆဲခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းမှ မိမိကိုယ်ကို မကာကွယ်ခဲ့ပါ။ အကြောင်းမှာ၊ ပိလတ်မင်းထံ ပြောကြားသကဲ့ သို့ “ငါ၏နိုင်ငံသည် ဤအရပ်နှင့်မစပ်ဆိုင်ဟု မိန့်တော်မူသည်” (ယောဟန် ၁၈း၃၇)။
၃။ တတိယ၊ ယေရှု၏နှုတ်မဖွင့်ဘဲ၊ ငြိမ်သက်စွာ ခံသွားရခြင်းအကြောင်း ရွှေကျမ်းပိုဒ်၌ မည်သို့မိန့်တော်မူသနည်း?
ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရပ်လျှက် နောက်တစ်ကြိမ်ဖတ်ကြပါစို့၊
“ထိုသူသည် ညင်းဆဲခြင်းနှင့် နှိပ်စက်ခြင်း၊ ရှုတ်ချခြင်းကိုခံ၍ နုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ ၏။ အသေသတ်ခြင်းငှါ ဆောင်သွားသောသိုးသငယ်ကဲ့သို့ သူ့ကိုဆောင်သွား၍၊ သိုးသည် အမွေးညှပ် သောသူရှေ့မှာ မမြည်ဘဲနေသကဲ့သို့၊ သူသည် နုတ်ကိုမဖွင့် ဘဲနေ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၇)။
“ကိုယ်တော်သည် ညှင်းဆဲခြင်းနှင့်နှိပ်စက်ရှုတ်ချခြင်းကို ခံခဲ့သည်”။ ဒေါက်တာယန်း ပြောကြား ချက်ကို ဘာသာပြန်ရာတွင် “ကိုယ်တော်သည် မိမိကိုယ်ကို နှိပ်စက်ခံဖို့ ခွင့်ပြုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။” မိမိကိုယ်ကို အညှင်းခံလိုခြင်းဟူ၍ဆိုသည်။ မိမိ၏နုတ်ထဲက မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ပြောဆိုမှုမပြု လုပ်ခဲ့ပါ။ ပိလတ်မင်း၏ ရှေ့တော်မှောက်သို့ ကိုယ်တော်ရောက်ရှိသောအခါ၊ တစုံတရာနုတ်မွတ်ဆို ခြင်းမရှိဘဲ၊ ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုချက်တို့ကို ပြည့်စုံစေခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်တော်အား ကဲ့ရဲ့ပြောဆိုသော အခါ ပြန်လည်၍ပြည့်စုံခြင်းမရှိခဲ့ချေ။ ရှုတ်ချနှိပ်စက်ကြသောအခါ ပြန်လည်၍တုန့်ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ) (Edward J. Young, Ph. D., The Book of Isaiah, Eerdmans, 1972, volume 3, pp. 348-349).
“ပိလတ်မင်းကလည်း၊ သင့်တဖက်၌ အဘယ်မျှလောက် သက်သေခံကြသည်ကို သင်မကြား သလောဟု ပြောသော်လည်း၊ စကားတခွန်းကိုမျှ ပြန်တော်မူသည်ကို မြို့ဝန်မင်းသည် အလွန်အံ့ကြလေ၏” (မဿဲ ၂၇း၁၃-၁၄)။
“ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့သည် များစွာအပြစ်တင်ကြ၏။ တဖန်ပိလတ်မင်းက၊ သင်သည် တခွန်းကိုမျှ ပြန်မပြောသလော့။ သင့်တဘက်၌ အဘယ်မျှလောက် သက်သေခံကြသည်ကို ကြည့်ကြပါဟု မေးသော်လည်း စကားတစ်ခွန်းကိုမျှ ပြန်တော်မမူသည်ကို ပိလတ်မင်းသည် အံ့ဩလေ၏” (မာကု ၁၅း၃-၅)
“ထိုသူသည် ညင်းဆဲခြင်းနှင့်နှိပ်စက်ခြင်း၊ ရှုတ်ချခြင်းကိုခံ၍ နုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏။ အသေ သတ်ခြင်းငှါ ဆောင်သွားသောသိုးသငယ်ကဲ့သို့ သူ့ကိုဆောင်သွား၍၊ သိုးသည် အမွေးညှပ် သောသူရှေ့မှာ မမြည်ဘဲနေသကဲ့သို့၊ သူသည် နုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၇)။
ဟေရှာယ ၅၃း၇၌ ခရစ်တော်သည် သိုးသငယ်နှင့် ခိုင်းနှိင်းထားပါသည်။ ဓမ္ဓဟောင်းကာလ၌ ဘုရားသခင်ရှေ့ ယဇ်ပူဇော်ဖို့ သတ်ဖြတ်လေ့ရှိကြ၏။ အသေသတ်မည့်သိုးကို ပြင်ဆင်သောအခါတွင်၊ ဦးစွာသိုးမွေးကို ညှပ်လေ့ရှိသည်။ အမွေးကိုညှပ်သောအခါ သိုးသည် အသံကိုအပြုဘဲနေ၏။ အသေ သတ်မည့်သိုးသည် အမွှေးညှပ်သောအခါ မမြည်ဘဲနေသကဲ့သို့ “ကိုယ်တော်သည် နှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲ နေ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၇)။
ဗတ္တဇံဆရာ ယောဟန်ကလည်း ကိုယ်တော်အား သိုးသူငယ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဤလောက၏အပြစ်ကို ဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏သိုးသူငယ်ကို ကြည့်လော့။” (ယောဟန် ၁း၂၉)။
သင့်အပြစ်အတွက် ကိုယ်တော်ကားတိုင်ထက် အသေခံပေးခြင်းကို ယုံကြည်သောအခါ၊ သင် သည် ဘုရားသခင်ရှေ့ အပြစ်ကင်းလျှက်ရှိသည်။ သင့်အပြစ်ရေူအးကးပေးဆပ်ဖို့ ကားတိုင်ထက် ကိုယ်တော်အသေခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သွန်လောင်းတော်မူသော အသွေးတော်အားဖြင့် သင်သည် သန့် ရှင်းခြင်း ခံရပြီဖြစ်သည်။
အမေရိကန်-အိန္ဒယအနွယ်ကြား၌ သာသနာပြုသွားခဲ့သော ဒေးဝိဒ်ဘရိန်းသည် အထက်ဖော်ပြ သောသမ္မာတရားများကို သာသနာခရီးတလျှေက် ဟောကြားခဲ့သည်။ အမေရိကန်-အန္ဒိယအနွယ်ဖွား တို့အား ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ယေရှု၏အသေခံပေးခြင်းမှ အဝေးကို ဘယ်တော့မှ ထွက်ပြေးမသွား ဘူး”ဟူ၍ ပြောခဲ့သည်။ ခရစ်တော်ဘုရား ကားတိုင်၌ ကိုယ်စားအသေခံပေးခြင်းက ထိုသူတို့ကို စိတ်ဝင်စားစေသည်က လွဲ၍၊ အခြားသောအရာအားဖြင့် သူတို့အသက်တာပြောင်းလဲအောင် ကျွန်ုပ် မလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ။” (Paul Lee Tan, Th.D., Encyclopedia of 7,700 Illustrations, Assurance Publishers, 1979, p. 238).
ယနေ့တိုင် ၎င်းပြောကြားချက်သည် အမှန်ဖြစ်နေဆဲပါ။
“ခရစ်တော်သည် ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်း ငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေခံတော်မူ၏” (၁ကော ၁၅း၃)။
အသေခံလျှက်၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသော ကယ်တင်ရှင်ထံ မိမိအသက်တာကို ဆက်ကပ်အပ်နှံ လျှင် သင်သည် ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်နေပါပြီ။ လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်တစ်ခုချင်းစီကိုလည်း နား လည်သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မည်။ , kHကြည်ခြင်းဖြင့် ခရစ်တော်ကိုကိုးစားလက်ခံပါ၊ သင်ကယ် တင်ခြင်းရမည်!
စပါဂျန်သည် မသေခင်တွင်၊ “အကျွန်ုပ် ဓမ္မဗေဒ၌ စကားခွန်း လေးမျိုးသာရှိသည်ဟုဆို၏ ]ယေရှုကျွန်ုပ်ကို ချစ်သည်}။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သေခြင်းမှတဖန် ရှင်လာဦးမည်ဆိုလည်း ယေရှုအသေခံ သည်ဟု ကျွန်ုပ်ပြောမည်မဟုတ်ပါ။ ယေရှုကျွန်ုပ်အတွက် အသေခံသည်ဟုသာ ပြောပါမည်” (Tan, ibid). ထိုသို့သင်ပြောနိုင်ပါမည်လား? “ယေရှုကျွန်ုပ်အဖို့ အသေခံပြီ”ဟူ၍ သင်ပြောနိုင်ပါမည်လား? ထိုသို့ သင်မပြောနိုင်သေးလျှင် အသက်ရှင်ပြန်လာသော ကယ်တင်ရှင်ထံမိမိအသက်တာကို အပ်နှံမည် လား? မိမိအသက်တာကို ကိုယ်တော်ထံ ဆက်ကပ်အပ်နှံလျှက်၊ ကိုယ်တော်၏အသွေးတော်ဖြင့် အပြစ်ကို ဆေးကြောပြီးဖြစ်၍ ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်ပြီဟု သင်ပြောပါမည်လား? ထိုသို့ယုံကြည်ပါ မည့်အကြောင်း ဘုရားသခင်သင့်ကိုမစပါစေသော်၊ အာမင်!
ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရပ်လျှက် သီချင်းနံပါတ် ခြောက်ဖြစ်သော၊
ကျွန်ုပ်၏ဘုရား အခေါ်ခံခြင်းငှါ၊ အသေခံခြင်းလား?
(၁၇၀၇-၁၇၈၈ခုနှစ်၊ ချားလ် ဝီစလီ သီကုံးသော “ဖြစ်နိုင်မည်လော့?”)။
ယေရှု၏ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုနားလည်ကာ အသက်တာအသစ်သို့ ပြောင်း လဲလိုလျှင် သင်ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ကျွန်ုပ်တို့တိုင်ပင် ဆွေးနွေးပေးပါမည်။ သင်ထိုင် နေရာကနေ ဆွေးနွေးခန်းဆီသို့ လှမ်းလာခဲ့ပါ။ ဒေါက်တာ ဂေဂန် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ ဦးဆောင် ပေးပါလိမ့်မည်။ ဆွေးနွေးခန်းသို့ ယခုပင်သွားစေလိုပါသည်။ မစ္စတာလီက ကျေးဇူးပြု၍ ဆွေးနွေး ခန်းသွားကြမည့် သူတို့အဖို့ ဆုတောင်းကူညီပေးပါ။ အာမင်!
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာ ဂရိတန်အယ်မှ ဟေရှာယ ၅၂း၁၃၊ ၅၃း၇ကို ဖတ်ကြားပေးပါ သည်။
-ဒေသနာတော် မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင် ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၉၁၄-၁၉၉၃ ခုနှစ် အီရာ အက်ဖ်စတန်ဖီလ် သီကုံးရေးသားသော “ဆူးရစ်သရဖူ” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေး ပါသည်)။
၁။ ပထမ၊ ယေရှုဟုခေါ်သော လူသားကား အဘယ်သူနည်း ထိုသူအား ပရောဖက်ကကြို တင်ပြောကြားခဲ့သည်၊ (ယောဟန် ၁ဝး၃၀၊ ၁၁း၂၅၊ ၁၄း၆)။
၂။ ဒုတိယ၊ မိမိကို ညှင်းဆဲနှိပ်စက်ကြသောသူတို့အား ယေရှုသည် ကိုယ်ကိုကို မကာကွယ်ခဲ့ သနည်း? (မဿဲ ၁၆း၂၁)၊ (၁တိ ၁း၁၅)၊ (ယောဟန် ၁၈း၃၇)။
၃။ တတိယ၊ ယေရှု၏နှုတ်မဖွင့်ဘဲ၊ ငြိမ်သက်စွာ ခံသွားရခြင်းအကြောင်း ရွှေကျမ်းပိုဒ်၌ မည်သို့မိန့်တော်မူသနည်း? (မဿဲ ၂၇း၁၃-၁၄)၊ (မာကု ၁၅း၃-၅)၊ (ယောဟန် ၁း၂၉)၊ (၁ကော ၁၅း၃)။